ကျွန်ုပ်တို့သည်မှတ်ဉာဏ်အမြှုပ်သို့မဟုတ်နွေ ဦး မွေ့ရာများကိုကျွန်ုပ်တို့ချစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများ | Rayson
ကျွန်ုပ်တို့သည်မှတ်ဉာဏ်အမြှုပ်သို့မဟုတ်နွေ ဦး မွေ့ရာများကိုကျွန်ုပ်တို့ချစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများ
ငါ \_ t ရေဒီယို shack မှ 2N22222 pnjunction transistors အသုံးပြု။ Trduino \_ 'S PIN Connection ကို Transistor ၏အောက်ခြေနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ PIN LINE နှင့် Transistor Center Pin တို့အကြား Reversor ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ စုဆောင်းသူ (ညာဘက် pin) ကိုမြေပြင်သို့ဝင်ပါ။ Power Supply ၏5v မှ LED ဝါယာကြိုး၏အပြုသဘောဆောင်သော ဦး ဆောင်ဆက်သွယ်ပါ။
အဆီပြန်သောအသားအရေကိုဂရုစိုက်ခြင်းအပြင်ကျန်းမာသောအလှည့်အနေဖြင့်ကျန်းမာသောအစားအစာကို အသုံးပြု. ဝက်ခြံပပျောက်ရေးအတွက်ဖြေရှင်းနည်းများကိုဆွေးနွေးရန်ဆရာဝန်နှင့်တွေ့ဆုံရမည်။ ပါးစပ်မူးယစ်ဆေးဝါးအချို့ကိုဗီတာမင်ဓာတ်အနကျအယကွက်အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ ဝက်ခြံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုထိန်းချုပ်ရာတွင်ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်အတူဒေသခံလိမ်းဆေးများရှိသည်။ angne ​​creama ကို သုံး. ဤစာစောင်ကိုအရေးယူပါနှင့်။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်မီးခွက်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကို ဖြတ်. ကျွန်ုပ်တို့သွားသောဝါယာကြိုးများကိုယူလို။ , သူတို့ကိုသင်အတူတကွဂဟေပြီးနောက်အပိုဝါယာကြိုးများများစားစားရှိလိမ့်မည်။ ဤပြ problem နာကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်0မ်ကိုမီးခွက်၏အခြားဘက်ခြမ်းမှသာဆွဲပါ။